ဘယ်လ်ဂျီယံမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (၁၅) ခုက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်မည် - Industry Directory
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် ဘယ်လ်ဂျီယံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီးဦးဆောင်ပြီး ဘယ်လ်ဂျီယံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် (၁၅) ဦးပါဝင်သော
ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကို သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကဏ္ဍများအလိုက် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးရန် မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့က ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်ရုံးမှာ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အင်ဂျီနီယာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း (၁၅၄) ခုကို ရှာရန်နှိပ်ပါ
ဘယ်လ်ဂျီယံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Philippe KRIDELKA (AMBABEL BANGKOK) မှ “အခု ကျွန်တော်တို့ ဒီက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၁၅ ခုကဆိုရင် မြန်မာပြည်က လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ စီးပွားရေးအစီအစဉ်တွေ လေ့လာဖို့အတွက် လာရောက်တွေ့ဆုံကြတာ ဖြစ်ပြီးတော့ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးတက်စေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Asia-Pacific (AWEX BRUXELLES) ၏ ဒါရိုက်တာ Mr. Eric DE CLERCQ က “ကျွန်တော်တို့ Wallonia ဒေသရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၁၅ ခုက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဈေးကွက်တစ်ခုချဲ့ထွင်နိုင်ဖို့အတွက် မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်တွင်မှာသာမက မန္တလေးလိုမျိုး တခြားနေရာတွေကိုလည်း လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လ်ဂျီယံဘက်မှ ဆောက်လုပ်ရေး၊ နည်းပညာ၊ ကလေးအာဟာရနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ဓာတ်ငွေ့နှင့် စွမ်းအင်၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ တိရိစ္ဆာန်မျိုးရိုးဗီဇ အစရှိသည့်နယ်ပယ်များမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များမှ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
Read More >>>> အစ္စရေးလုပ်ငန်းရှင်များက မြန်မာနှင့် ပူးပေါင်းပြီး စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်လိုကြောင်း ကမ်းလှမ်းလာ
ဘယ္လ္ဂ်ီယံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (၁၅) ခုက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မည္
ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံသံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီးဦးေဆာင္ၿပီး ဘယ္လ္ဂ်ီယံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ (၁၅) ဦးပါဝင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းက႑မ်ားအလိုက္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးရန္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္႐ုံးမွာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ဘယ္လ္ဂ်ီယံသံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Philippe KRIDELKA (AMBABEL BANGKOK) မွ “အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၁၅ ခုကဆိုရင္ ျမန္မာျပည္က လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ စီးပြားေရးအစီအစဥ္ေတြ ေလ့လာဖို႔အတြက္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံၾကတာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးတက္ေစဖို႔ ရည္႐ြယ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
Asia-Pacific (AWEX BRUXELLES) ၏ ဒါ႐ိုက္တာ Mr. Eric DE CLERCQ က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ Wallonia ေဒသရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၁၅ ခုက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေဈးကြက္တစ္ခုခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္တြင္မွာသာမက မႏၲေလးလိုမ်ိဳး တျခားေနရာေတြကိုလည္း ေလ့လာသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဘယ္လ္ဂ်ီယံဘက္မွ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ နည္းပညာ၊ ကေလးအာဟာရႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ စြမ္းအင္၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ တိရိစာၦန္မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ အစရွိသည့္နယ္ပယ္မ်ားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ပြင်သစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် စိတ်ဝင်စား
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဆွဲဆောင်နိုင်ရန်အတွက် စင်ကာပူတွင် အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရရှိသူအဖြစ် လျှောက်ထားနိုင်သည့် အစီအစဉ်
အော်ပရေတာ (၄) ဦးအား Sim Registration ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို မလိုက်နာ၍ ဒေါ်လာတစ်သိန်းစီ ဒဏ်ရိုက်